एउटा स्वर्णिम अनुभूति (फिल्म समीक्षा : द लाइन किङ) - मनोरञ्जन - नेपाल
फिल्म : द लाइन किङ | रेटिङ : ३.५/५
कलाका अन्य विधाभन्दा सिनेमासशक्त किन मानिन्छ भने निर्देशकले कल्पना गरेको संसार दृश्यभाषाबाट अभिव्यक्ति गर्न सक्छन् । एकदमै काल्पनिक कथालाई पनि वास्तविकझैँ भावनाको लेपमा पस्कने सकिने सामर्थ्य हुन्छ सिनेमामा । प्रविधिको तीव्र विकास यस्ता कथावाचनमा वरदान भइहाल्यो । त्यसो नहुँदो त, द लाइन किङजस्ता मनमोहक सिनेमाको साक्षी हुन पाइन्थ्यो र ? यो अंग्रेजी चलचित्रमा एउटै मान्छे छैनन्, सबै जनावर तर पात्र र तिनका भोगाइले यसरी बाँध्दै लान्छ कि पर्दाबाट आँखा अन्त जाँदैन । जोन फाभ्रेउ निर्देशित द लाइन किङ सन् १९९४ मा बनेको यही नामको एनिमेटेड फिल्मको रिमेक हो । जोनले यसअघि द जंगल बुकमार्फत प्रशस्त ख्याति कमाएका थिए । यसपटक उनले जंगलको राजा सिंहको आफ्नो राज्यप्रतिको प्रेम र त्यागको कथा रोजेका छन् ।
अफ्रिकाको एउटा जंगलमा मुफासाको राज्य छ । हरेकको रेखदेख गर्ने उदार राजा मुफासालोकप्रिय छ । उसको छोरो सिम्बालाई राजकुमार घोषणा गरिन्छ तर सिंहासन ताकिरहेको मुसाफाको भाइ स्कारलाई यो पाच्य हुन्न । स्कार हिस्रंक जनावरसँग मिलेर सत्ता हडप्ने खेलमा लाग्छन् । कतिसम्म भने, उनकै दाजु मुफासाको हत्या गरिदिन्छन् । तर अरुले पत्तै पाउँदैनन् । बरु आफूलाई बचाउन आउँदा बुबा मरेकोमा सिम्बालाई पश्चाताप हुन्छ । राज्य छोडेर अन्त कतै जान्छन् । उतै हुर्कन्छन् । बुबाले सिकाएको राज्यप्रतिको जिम्मेवारी भुलेर सिम्बा कहिल्यै नफर्केलान् ? स्कारसँग बदला लेलान् ?
पात्र, उनीहरुको आनीबानी र जीवनशैलीलाई विश्वसनीय ढंगबाट चिनाइएको छ । सोही कारण जनावर भएपनि तिनले दर्शकको संवेदना जित्छन् । हरेक पात्रमा मानवीय भावनाको लेप लगाउनु निर्देशक र पटकथाकारको खुबी हो । मुफासालाई सच्चा र बफादार राजाको रुपमा चित्रित गरिएको छ । गर्जनसाथ जनावरहरु एकसाथ भेला हुन्छन्, निर्णयहरु सबैका लागि घोषणा गरिन्छ । त्यस्तै, मुफासाले छोरा सिम्बालाई राज्य सञ्चालनका तौरतरिका र अन्य जनावरप्रति जिम्मेवारीबोध गराउने दृश्य पनि मजबुत छन् । स्कारको नियतचाहिँ सुरुबाटै खराब लाग्छ । विरोधी समूहसँग मिलेर आफ्नै परिवार नास गराउने स्कारको हर्कतले अनेकौँ वास्तविक घटनाको याद दिलाउँछ ।
द लाइन किङका हरेक जनावर वास्तविक लाग्छन् । पार्श्व संगीतले फिल्मको दुनियाँमा सयर गराउन अझ अहम् भूमिका खेल्छ । दृश्यको भाव र आवश्यकताअनुसार सिर्जना गरिएको साउन्ड–ट्र्याक कथावाचनमा कति अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रमाण हो यो फिल्म । गीतहरुले पात्रको भावना व्यक्त गर्दै कथा अगाडि बढाउँछन् । जनावरबीचको भिडन्त, उनीहरुको आन्तरिक प्रेम र खिचातानीलाई पनि रोचक शैलीमा पर्दापण गरिएको छ । वास्तविक संसारमा राजाहरुको लोकप्रियता निमिट्यान्न हुँदै छ तर द लाइन किङको राजालेचाहिँ जो–कोहीको मन जित्छन् ।
जनावरलाई छोड्ने हो भने यस फिल्मको कथा नौलोचाहिँ होइन । दाइको राज्यमाथि भाइले आँखा गाड्ने र राज्यमा अनेकौँ संकट आइलाग्ने कथा सिनेमाका लागि सामान्य हुन् । हलिउडमै अनेक रुप र कोणमा हेरिसकिएको छ तर जनावरलाई जीवन्त ढंगले चित्रण गरिएकाले विशेष लाग्छ । सिम्बा आफ्नो राज्य फर्कने कारण र तरिका विश्वसनीय छैन । छट्टु र धोकेबाज स्कार अन्तिममा आफ्नै गुटको सिकार हुन्छ ।ज्याजु, पुम्बा, सराबी, राफिकीजस्ता अनेक रोचक चरित्रले फिल्मलाई सशक्त बनाउन भूमिका खेलेको छ । जनावर र चराको आवाजचाहिँ कलाकारले ‘डबिङ’ गरेका छन् । ओरिजिनल फिल्ममाडोनाल्ड ग्लोभरले सिम्बाका लागि आवाज दिएका छन् । यसको हिन्दी भर्सनमा मुसाफाको आवाज शाहरुख खान र सिम्बाको उनका छोरा आर्यन खानले ‘डबिङ’ गरेका हुन् ।
एनिमेटेड मात्र होइन, सुन्दर र सरल कथा हेर्न चाहने हरेक उमेर समूहका दर्शकका लागि हो, द लाइन किङ ।
ट्याग: फिल्म समीक्षाद लाइन किङ